Ukuphupha ngembangi Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ➡ ➡️
Ombangi ngomnye wemifanekiso yeklasi yotshaba emaphupheni. Ngequbuliso kukho umntu ofuna ukuthatha into kuwe. Kodwa ngamanye amaxesha le mvakalelo yesikhwele ayinakuba nesiseko ngokupheleleyo kwaye ubona umntu njengotshaba, nokuba akakho kwaphela.
Ke lithetha ntoni iphupha lomchasi? Ithetha ntoni isimboli yamaphupha? Kuthetha ukuthini xa umntu ophuphayo ngokwakhe evela njengembangi ephupheni?
1 Uphawu lwephupha «imbangi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «imbangi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «imbangi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «imbangi» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi, uphawu lwephupha "imbangi" lubhekisa kwelinye utshaba lokwenene en el mundo yomlindo. Ukuphupha kubonisa ukuba kukho umntu kwindawo okuyo okhoyo ofuna ukukulimaza okanye akwenzele ubunzima. Ochasene naye njengophawu lwephupha angabhekisa kubo bobabini abaqeqeshiweyo (umzekelo, umntu osebenza naye) kunye nemeko yobomi babucala (umzekelo, umhlobo) wephupha.
Isimboli yephupha 'lokulwa' inokuba luphawu lwe nomona yamaphupha kwihlabathi lokuvuka. Nangona kunjalo, ubukhulu becala, oku akunasiseko kwaye iphupha linokuxhomekeka ngokuzolileyo kuthando lwakho nakwintsebenziswano.
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kutolika imbangi njengophawu lwephupha kwanophawu lwe iimeko ezingathandekiyo nezicwangciso. Ukuphupha akuyi kuphumelela kuyo yonke into esezweni lokuvuka njengoko ungathanda.
Ukuba iphupha libona imbangi engaziwayo ephupheni, uphawu lwephupha lujika lube ngokuchaseneyo. Oku kuthetha ukuba iphupha liba linye kwihlabathi elivukayo. Ubuhlobo obutsha gqiba.
Ukuba iphupha eloyisa umchasi walo ephupheni, liya kuba nakho ukusombulula zonke iingxaki zeshishini kwihlabathi elivukayo kwaye ke likwazi uku ukuchuma kwezemali yiza. Nangona kunjalo, uxolelwaniso nembangi ephupheni kufuneka iqondwe kutoliko jikelele lwephupha njengesilumkiso kubahlobo ababuxoki.
Uphawu lwephupha «imbangi» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwenkcazo yengqondo yephupha, ukhuphiswano nembangi ephupheni lingawela kumphuphi. umzabalazo wamandla wangaphakathi Iingoma. Kweli phupha, iimvakalelo ezahlukeneyo ezichaseneyo ziyalwa. Ngephupha lakhe, umphuphi kufuneka ngoku aqonde ukuba kufuneka awususe lo mlo kwihlabathi lokuvuka. Kungenxa yokuba kuphela emva koko oya kukulungela ukuthatha izigqibo eziphathekayo ngobomi bakho kwakhona.
Ukutolikwa ngokwengqondo kwephupha kukwatolika uphawu "lwembangi" njengophawu lomona. Oku kuveliswe kwihlabathi lamaphupha avukayo uxinzelelo lweemvakalelo kwaye ngoku ufuna ukufikelela kulwazi kumaphupha akho.
Ukuba umphuphi uzibona njengotshaba ephupheni, iphupha lakhe liya kumcela ukuba adibanise nokuphikisana kwakhe kwangaphakathi. Ngale ndlela ubuyela kuye kwakhona Ubunye kwaye ekugqibeleni uyakwamkela kwaye uzithande.
Uphawu lwephupha «imbangi» - ukutolika kokomoya
Ngokwasemoyeni kuthathelwa ingqalelo uphawu lwe «pikisanayo» iphupha inokuba liphupha ukoyika bonisa ukuba abanye abantu bayakukhathaza.